वैक्यूम क्लीनर MIELE: अवलोकन, विशेषताहरु र वर्णन, दृश्य र समीक्षा। MIELE भ्याकुम क्लिनर बैग
आधुनिक निर्माताहरु को दर्शनमा घरेलू उपकरण लामो Housewives को हात मा एक सहायक उपकरण भएनन् छन्। यस निर्वात क्लीनर को हाल परिमार्जन उदाहरणहरू विद्युतीय प्रणाली सफाई कार्यहरू पूरा दायरा अपनाउने कसरी देखाउन। प्रयोगकर्ता मात्र सेटिङहरू समायोजन र एकाइ टाउको परिवर्तन, मोड नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। यी सुविधाहरू पछिल्लो संस्करण मा MIELE वैक्यूम क्लीनर प्रदान छ। तर परम्परागत खण्ड उपेक्षित छोडिएको छ। यसलाई प्रभावकारी धूलो र माटो बाट घर छुटकारा आफ्नो कार्यहरु कि सस्ती र व्यावहारिक मोडेल छ।
मुख्य विशेषताहरु MIELE vacuums
कक्षा मा प्रतियोगिहरु को सबै भन्दा विपरीत, जर्मन निर्माता रेकर्ड वृद्धि काम प्रदर्शन खोजिरहेका छैन, र आफ्नो संयोजन मा अधिकतम रकम प्राप्त गर्न छ। उदाहरणका लागि, औसत शक्ति दायरा भिन्न 1700 देखि 2000 वाट गर्न। 1500 वाट - साना मोडेल पनि कम क्षमता छ। प्रवेश स्तर मोडेल मा एक धूलो कलेक्टर को मात्रा प्रिमियम परिवार छ लिटर सम्म समायोजित गर्न सक्छन् 3-3.5 लिटर र प्राविधिक प्रतिनिधिहरू छ। व्यवस्थापन प्रणाली को मामला मा पनि विविधता मनाइन्छ। वैक्यूम क्लीनर को मानक डिजाइन मा एक यांत्रिक नियन्त्रण तत्व तथापि, अत्यधिक विश्वसनीय छन् जो MIELE। लगभग सबै आधुनिक संस्करण स्पर्श प्यानल प्रदान गर्दै छन्, साथै मोबाइल उपकरणहरू वायरलेस डाटा लिंक मार्फत संग अन्तरक्रिया समर्थन। र नियमित रिमोट नियन्त्रण उल्लेख छैन।
परम्परागत तल्ला मोडेल
संकुचित C1 र C2: यी मोडेल धेरै श्रृंखला उपलब्ध छन्। वैक्यूम क्लीनर structurally पारंपरिक फारम कारक गठन र मुख्य सफाई मोड मा काम गर्न डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ। संलग्न आधारमा, प्रयोगकर्ताले फर्श, फर्नीचर, त्यसैले एक भ्याकुम क्लिनर MIELE क्लासिक, धेरै संस्करण मा ग्राहकहरु उपलब्ध पनि छ जो एक खण्ड को डी राम्रो प्रतिनिधि हटाउन सक्नुहुन्छ स्थानहरू पुग्न blockages हार्ड राहत, र।। यस प्रकारका उपकरण मोडेल सुविधाजनक र घर वरिपरि शरीर सार्न सहज अनुमतिको Ergonomic casters को उपस्थिति द्वारा विशेषता छन्।
निर्माता यो एक विश्वसनीय र व्यावहारिक जडान प्रणाली, Ergonomic ह्यान्डलहरू र स्थिर पङ्क्तिमा भराई भित्र चलिरहेको छ भन्ने परिणाम संग, विभिन्न डिजाइन विवरण को विकास गर्न विस्तार र नजिक। साथै, विभिन्न प्रभावकारी हल्ला कमी प्रणाली, इन्जिन ध्वनि लगभग अश्राव्य छ मार्फत को "क्लासिक" श्रृंखला मा MIELE वैक्यूम क्लीनर।
यो डिजाइन को धेरै विचार सफाई दक्षता वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कि फोकस थप सहज र फलदायी अवशोषण लागि काम शरीर को एक विशेष व्यवस्था छ, छ। रैक को रूप मा समुच्चय जर्मन डिजाइनर तर क्लीनर MIELE पूरा C3 खोल्ने छैन सबै भन्दा राम्रो ठाडो उपकरण सबै लाभ पूरा गर्न सकेन। सबै माथि, यी लाभ कार्य (बारेमा 14 मिटर) को उच्च अर्धव्यास मा व्यक्त गर्दै छन्, स्विंग-tilting संयन्त्र सञ्चालन प्यानल र नलिका को एक विस्तृत विविधता संग संयोजन को संभावना को maneuverability। सफाई को मामला मा सबै भन्दा समस्याग्रस्त मानिन्छ जो सफाई गलैँचा, - यो अर्थमा, यो ठाडो मोडेल को मुख्य thrust टिप्पण लायक छ।
रोबोट भ्याकुम क्लिनर MIELE
यो उत्पादन MIELE डिजाइनर लगभग यसलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिन मात्र आवश्यक छ भन्ने एउटा स्वतन्त्र क्लीनर रूपमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अवधारणा मानक वैक्यूम क्लीनर दुई आधारभूत मतभेद छ जो एक मोडेल स्काउट RX1, रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छ। आवश्यक सेटिङहरू संग काम सुरु निर्देश लागि बाहेक, पाठ्यक्रम - पहिले, को प्रविधी मानिस देखि पूर्ण स्वतन्त्रता मा काम गर्छ। तर सबै आन्दोलनहरु र सफाई मिसिन कार्यहरु यो एक विशेष घडी प्रदान गर्दछ रूपमा कुनै एक, घर छ पनि भने, आफैले प्रदर्शन गर्दै छन्। दोश्रो, यसलाई उल्लेख गर्नुपर्छ संग रोबोट वैक्यूम क्लीनर MIELE endowed जुन अति-संकुचित आयाम। समीक्षा मोडेल RX1 चाँडै र सही परम्परागत भ्याकुम क्लिनर डिजाइन पनि लामो चुच्चो संग असहाय हुनेछ जहाँ डेस्क, टेबल, बेड र अन्य ठाउँहरूमा अन्तर्गत सफाई गर्न भन्छन्।
वैक्यूम क्लीनर को समीक्षा
सामान्य जर्मन उत्पादनहरु सकारात्मक प्रौद्योगिकी नयाँ मोडेल विकास को निर्माता को इच्छा कदर गर्ने प्रयोगकर्ताहरू, द्वारा कथित। एकै समयमा, धेरै विकासकर्ताहरूले क्लासिक डिजाइन मा निर्वात क्लीनर को कार्यान्वयन गर्न नजिकिंदै प्रशंसा गरे। यो बजार छोड्न थियो लामो समय को लागि पुरानो फारम कारक जस्तो थियो, तर यो हुँदैन। यो वर्ग मा, त्यहाँ पनि MIELE वैक्यूम क्लीनर नयाँ, टिप्पणी सम्मेलन को विश्वसनीयता, राम्रो लाग्यो-बाहिर Ergonomics र आधारभूत कार्यहरु को दक्षता समीक्षाएँ जो छन्। हामी विशेष प्रशंसा र एक रोबोट भ्याकुम क्लिनर एउटा उदाहरण पुष्टि गर्छ जो ब्रान्ड, उच्च-टेक विकास दिनुपर्छ। मालिकको यो मोडेल को लागि धन्यवाद, घरेलू सफाई को प्राविधिक संगठनमा एक विशाल सफलता गरेको थियो जोड।
MIELE भ्याकुम क्लिनर बैग
यस कम्पनीको स्वामित्व प्रविधिहरू यस क्षेत्रमा MIELE बीचमा यो धूलो संग्रहकर्ता असामान्य विशेषताहरु टिप्पण लायक छ। पहिलो स्थानमा तिनीहरूले लामो जीवन फरक। यो आधार संशोधनहरू र 6-लीटर धूलो कलेक्टर, जो मोडेल गतिशील U1 आउँछ लागि subcompact बैग लागू हुन्छ। तर MIELE भ्याकुम क्लिनर बैग छ कि मुख्य सुविधाहरू, स्वच्छता र स्वच्छ गुण को उच्च स्तर, HyClean प्रविधि सुरक्षित छ। आधिकारिक, एक धूलो कलेक्टर असल कणहरु को 99.9% को क्रम retaining सक्षम। छाप को यस्तो उच्च परिणाम हदसम्म बहु-चरण सफाई संग फिल्टर को प्रयोग मार्फत हासिल छ। आफ्नो कार्य समर्थन र प्रभावकारी राम्ररी सफाई संग मलबे सङ्कलन र काम तंत्र र हानिकारक blockages को भ्याकुम क्लिनर को निर्माण को विवरण रक्षा गर्न उद्देश्य छ।
केही प्रविधिहरू को कार्यान्वयन को संभावनाहरु आकलन, निर्माता अक्सर एक विकल्प संग सामना गर्दै छन्: नयाँ उत्पादनहरु को मार्केटिङ पदोन्नति को पृष्ठभूमिमा विकास लाभ को मामला मा त सजिलै देखिने, तर जायज छैन उपभोक्ताहरु थप ध्यान आकर्षित मा, वा बाटोमा जाने। बारी मा, लगभग सबै संस्करण मा MIELE वैक्यूम क्लीनर यो उत्पादन को व्यावहारिक मूल्य गराउँछ जो दोस्रो निर्देशन, को चयन को परिणाम हो। जर्मन कम्पनी द्वारा प्रयोग प्रत्येक प्रविधि, राम्ररी परीक्षण, र त्यसपछि मात्र ठूलो खपत लागि परम एकीकरण प्रविधि अनुकूलन गर्न subjected। समीक्षा गरिन्छ कि पुरानो र विकासक्रम भूल र आजको प्रश्न प्रकार र प्रकारका दृश्य को बिन्दुबाट अन्य थप लाभप्रद स्वीकार छैन।
निर्मित ग्याँस ओवन, र यो चयन गर्न राम्रो छ के हुन्छ?
बयलर तातो पानी: त्यो कसरी हुन सक्छ?
सोधपुछ लागि Chopper (घरेलू) गर्न fecal कुरा को लागि एक पंप कसरी चयन गर्ने? ग्राहक समीक्षा र विशेषज्ञ सल्लाह
उचाल्नु - गोदाम मा र स्टूडियो प्रभावकारी सहायक
एक बेडरूम लागि: कसरी सही छनौट गर्न?
फूलगुच्छा, केक, मौरी: को "Kinder आश्चर्य" बाट एक आश्चर्य कसरी बनाउने?
Concertmaster र कोरियोग्राफर
कसरी इन्टरनेट मार्फत कर तिर्न? यो धेरै सरल छ
हामी सँगै यात्रा। क्यानाडा गरेको पूंजी
लामो प्रतीक्षा विवाह, वा कसरी विवाह गर्न एक मानिस प्राप्त गर्न
विश्राम संगीत - तनाव विरुद्ध आफ्नो सुरक्षा!
छाला देखि साफ कपाल डाई: उपयोगी सुझावहरू